Gadiidka ka howlgala Caasimadda oo amarro adag laga soo saaray “MUUQAAL” – Radio Muqdisho
Gadiidka ka howlgala Caasimadda oo amarro adag laga soo saaray “MUUQAAL”
Wasaaradda gaadiidka ayaa sheegtay in ay bilowday hubinta gaadiidka ka howlgalla magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la sheegay in intooda badan dadka wata aysan haysanin warqaddda milkiyadda gaadiidka ay wataan.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda gaadiidka iyo Taliyaha ciidanka Nabadgelyada Waddooyinka oo si wada jir ah ula hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in hay’adaha amniga lagu wargeliyay inay baaritaanno ku sameeyaan milkiyadda gaadiidka magaalada ka howlgalla, si loo hubiyo lahaanshiyaha gaadiidka.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda gaadiidka Cali Gacal Gaabow ayaa xusay in baaritaano la sameeyay lagu ogaaday in 50- gaadiid oo ay ciidanka gacanta ku dhigeen in dadkii watay aysan u haysanin warqad cad oo muujineysa milkiyadda gaadiidka ay wateen, isagoo xusay in laga bilaabo maanta ay hay’adaha amniga arrintaasi dabagal ku sameybnayaan.
“Wasaaraddu waxa ay ku howlaneyd hubinta gaadiidka magaalada ka howlgalla inta badan waxaa soo baxday in gadiidka dadka wata aysan haysan warqad rasmi ah oo cadeyn u ah lahaanshiyaha gaadiidka, dhammaan gaadiid layda waxaan faraynaa in cidkasta ay hubiso milkiyadda baabuurka ay wadato, Ciddii lagu soo qabto iyada oo wadata baabuur milkiyad qof kale ku qoranyahay sharciga ayaa la marsiin doonaa “ ayuu yiri Agaasimaha Guud ee Wasaaradda gaadiidka.
Sidoo kale agaasimaha waxa uu ku baaqay in dadka gadiidka kala iibsanaya in warqadda wareejinta baabuurka ay la tagaan xarunta wasaaradda gaadiidka si loo diiwaan galiyo.
Taliyaha ciidanka Nabadgelyada Waddooyinka ee Taraafiko Sareeyo Guuto Cali Xirsi Barre “Cali gaab” ayaa tilmaamay in ciidanka Nabadgelyada ay u taaganyihiin xaqiijinta gaadiidka iyo dadka wata.
Wasaaradda gaadiidka ayaa dadaal ugu jirta hubinta milkiyadda gaadiidka ka howlgalla magaalada, si loo ogaado haddii mid ka mid ah gawaaridaasi fal dambiyeed lagu halo cidda iska leh ee loo raacanayo, taasi oo qeyb libaax leh ka qaadan karta Nabadgelyada Caasimadda.
Taliyaha qeybta 12-ka April oo kulan la yeeshay saraakiisha kale ee qeybtaas “MUUQAAL”
Taliyaha qeybta 12-ka April oo kulan la yeeshay saraakiisha kale ee qeybtaas "MUUQAAL"